Ahenao ny fanahiana - ny lakileny tsara indrindra hahazoana izany | Bezzia
Tsy azonao antoka ny fomba hampihenana ny fanahiana? Mazava ho azy fa tsy zavatra tena tsotra hotanterahina izany fa anjarantsika ny misafidy andiana dingana na lakile manampy antsika hanana fifehezana ny fiainantsika sy ny saintsika. Noho izany, avelanay ianao miaraka amin'ny fanampiana lehibe izay tsy maintsy apetrakao haingana araka izay tratra.
Indraindray dia niseho tampoka teo amin'ny fiainantsika sy izany mety hiteraka olana lehibe na fanafihana mikorontana izay azontsika atao koa rehefa tsy ampoizintsika izany. Noho izany, alohan'ny zava-mitranga rehetra dia tsy maintsy miroso amin'ny asa aman-draharaha isika. Tonga ny fotoana hanafihana ny olana amin'ny fomba tsara indrindra fantatsika.
1 Ataovy loha laharana hatrany amin'ny fiainanao
2 Aza matahotra be loatra
3 Lazao hatrany ny fihetsem-ponao
4 Makà fotoana isan'andro
5 Mialà sasatra ampy hampihenana ny fitaintainanana
Ataovy loha laharana hatrany amin'ny fiainanao
Misy zavatra izay tsy azo atao isan'andro na amin'ny andro hafa, noho izany dia tsy maintsy mandray dingana kely nefa azo antoka isika. Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ity. Mipoitra ny fanahiana rehefa efa tototry ny adin-tsaina isika, rehefa tsy zakantsika intsony ary eo amboniny ny hozatra. Noho izany, tsara kokoa hatrany ny mijanona sy mieritreritra. Satria ny fototry ny zava-drehetra dia ny manao ho laharam-pahamehana izay tena zava-dehibe ary tsy maintsy tanterahintsika izany. Izay tsy, afaka miandry satria ny fahasalamantsika no lohalaharana. Ka ny fototry ny androntsika dia eo amin'ny fandaminana.
Aza matahotra be loatra
Raha tsy tonga ara-potoana ianao mba hahatanteraka ny eritreritrao dia aza manahy. Satria manana fetra isika rehetra ary tsy tokony hihoatra izany ianao raha tsy mbola fantatray izay miandry anay. Tsara kokoa ny mieritreritra tsara, satria raha manana vahaolana ianao, inona no soa azontsika iahiahy fatratra? Ary raha tsy manana ianao dia tsy ilaina koa izany. Tokony avelantsika hikorontana ireo eritreritra ratsy ireo satria raha tsy izany dia hipetraka ao an-tsaintsika izy ireo ary ho sarotra kokoa ny handroso.
Lazao hatrany ny fihetsem-ponao
Ny mamela ny zavatra tsapantsika isaky ny fotoana ao anatiny dia tsy zavatra tsara ihany koa. Noho izany, ny fanaovana ivelany dia mety foana. Raha azonao atao, tsy misy tsara noho ny havanao na ireo olona manokana anananao amin'ny fiainanao. Raha tsy izany dia tsy misy toa ny olona manampahaizana manokana hanome anao torohevitra tsara indrindra. Saingy ny fomba iray na ny hafa dia hahatsapa ho tsara kokoa ianao raha avoakanao fa tsy avelanao ao anatiny. Azo antoka fa efa fantatrao izany, saingy tsy mora ny mampihatra azy io ary fantatsika izany. Raha lany io dia manandrama manoratra aloha ny fihetsem-po ary ho hitanao fa izany no dingana voalohany hahatsapana ho tsara kokoa.
Makà fotoana isan'andro
Mety tsy dia manam-potoana firy ianao fa ny zavatra tsara dia tsy maintsy manana minitra vitsy foana isika. Azonao atao ny manao izay tianao indrindra, manomboka amin'ny filalaovana fanatanjahantena ka hatramin'ny fihainoana mozika. Zavatra mahatonga anao hahatsapa ho salama tsara kokoa, hampiala aina anao ary hanome anao hery ampy hanohizanao. Araka ny hitanao dia tsy ilaina ny manao dingana sarotra, fa ny manao ezaka kely isan'andro hanatanterahana izay nampanantenaina. Ary betsaka ny fotoana ho antsika.
Mialà sasatra ampy hampihenana ny fitaintainanana
Mazava ho azy fa ny olona te hampihena ny tebiteby dia tsy mahita torimaso tsara amin'ny alina. Ny tsy fahitan-tory dia mety misy ary lafiny ratsy hafa hany ka miteraka olana hatrany ny fitaintainanana. Noho izany, tsy maintsy mametraka fanao isan'andro isika, tsy maintsy tazonina izany amin'ny resaka fandaharam-potoana. Satria amin'izay vao ho zatra tsara kokoa ny vatana. Fa eny, rehefa manana olana amin'ny torimaso isika dia tsy maintsy mampihatra dingana amin'ireo zokiolona toy ny tsy misakafo hariva be dia be, mandro miala sasatra alohan'ny hatory na hamono ireo karazana fitaovana rehetra. Ho hitanao fa amin'ity fomba ity sy amin'ny totalin'ireo dingana rehetra dia azonao atao ny mampihena ny fanahiana ary mianatra mametra kely ny ahiahinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Psychology » Fanalahidy hampihenana ny fitaintainanana